अरूणिमालाई अचम्मको नशा ~ The Nepal Romania
शुक्रबार साँझको समय थियो , बेलुकी ८ बजे कार्याक्रम स्थलमा सहभागी हुन पुगेकी नायिका अरूणिमा लम्साल सहकर्मी रेजिना उप्रेतीसंग भलाकुसारी गरिरहेकी थिइन् ।सगरमाथा टेलिभिजनमा प्रसारण भईरहेको फिल्मी कार्यक्रम 'मुभि एक्सप्रेस' को १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नायक अर्जुन कार्की पनि संगै थिए । रेजिना र अर्जुनको बीचमा बसेकी अरूणिमा निकै मज्जाले हासिरहेकी थिइन् । लाग्थ्यो उनी त्यो समय कन्ट्रोल भन्दा बहिर थिइन् । तर त्यहाँ तीन जनाबीच भएको गफ भने सामान्य थियो ।आयोजकले ककटेल विथ डिनर पाटीका लागि बोलाएको सो कार्याक्रममा धेरै पिएकी थिइनन् अरूणिमाले । थोरै पिउदै उनलाई लागिसकेको थियो । पिउदै गरेको त्यो ग्लास नायक अर्जुन कार्की तर्फदेखाउदै उनले उल्टै प्रश्न गर्दै भनिन् 'यति थोरै पिउदा किन लागेको मलाई ?' उनलाई नशा लागेको देखेर नायिका रेजिना र अर्जुन मुसुमुसु हास्दै थिए ।
त्यति थोरै खादैमा किन लाग्यो त अरूणिमालाई ? उनले जवाफ दिईन 'म कोक पचाउन सक्दिन ।' उनले पिएको त्यो ग्लासमा कुनै वाईन थिएन् मात्र थियो कोकाकोला । कोकाकोला पिउदैमा चुर्लुम्म नशामा डुबेकी अरूणिमाले यदि साच्चिकै वाईन खाईन भने कस्तो नशा लाग्ला ?